अमेरिका बाटै दिइन तिर्सना बुठाथोकीने यस्तो (अन्रवार्ता) कथाले मागेपछी जे दिन पनि तयार छु : १८ वर्षका माथिकाले मात्र पढ्नुहोला ! – Todays Nepal
हरेक समयमा विभिन्न कारणले चर्चाका साथै विवादमा आउन माहिर मानिने मोडल तिर्सन बुढाथोकी पछिल्लो समयमा चलचित्र सगैं केहि म्युजिक भिडियोको छायांकनमा समेत व्यस्त छिन् । बलिउडकी पुनम पाण्डे समेत भनेर कहलिएकी पत्रकारले लेख्ने गर्छन र तिर्सनाले पनि बेलाबेलामा आफ्नै नग्न फोटोसुट गरेर पनि विवादमा आइरहेकी हुन्छिन् । र कहिले काही त लाइभ भिडियोमै आउने गर्छिन । उनैं तिर्सना बुढाथोकीसँग ७ वटा प्रश्न गरिएको कुराकानीको भाग –
-तिर्सना बुढाथोकीलाई बलिउडकी पुनम पाण्डे भनिन्छ नी ?
म पुनम पाण्डे होइन, म तिर्सना बुढाथोकी हुँ । मलाई पुनम पाण्डे भनेर दिएको नाम पत्रकार मित्रहरुले र मेरा फ्यानहरुले हो । मलाई बलिउडकी पुनम पाण्डे भनेर अर्थात पुनम पाण्डेसँग तुलना गरेर म चिनिन पाउदाँ निकै खुसी छु ।
तिर्सनालाई सेक्सी गर्ल भनिन्छ नी ? हो र ?
मलाई खुसी लाग्यो । मलाई अरुले सेक्सी गर्ल भन्दा निकैनै खुसी हुने गर्छु । संसारमा दुई थरीका अथवा दुई किसिमका यूवतीहरु हुन्छन् एउटा व्यूटिफुल गर्ल र अर्को सेक्सी गर्ल र मलाई सेक्सी गर्ल मनपर्छ । म सेक्सी गर्ल पनि हुँ । मलाई सेक्सी गर्ल जति भनेपनि पचाउन सक्छु र मलाई अझ भनुन जस्तो लाग्छ ।
-बेला बेलामा नग्न फोटोसुट गरेर बिबादमा आइरहनु हुन्छ,मोडल भएर त्यस्तो गर्न मिल्छ ?
तिर्सनालाई बेला बेलामा बिबादमा आउन मन पर्छ हो ?
– ।अहिलेसम्म तपाईले केहि म्युजिक भिडियो र केहि चलचित्रमा पनि अभिनय गर्नु भएको छ । तपाईलाई कस्तो चलचित्रबाट अफर आयो भने अंग प्रदर्शन गर्न तयार हुनुहुन्छ ?
शरिरलाई तन्दुरुस्त राख्न सेक्स आबश्यक छ भन्नु हुन्छ,तपाईको शरिरलाई तन्दुरुस्त राख्न सेक्सनै आबश्यक हो ?
हो मेरो शरिरलाई तन्दुरुस्त राख्न सेक्स नै आबश्यक छ र सेक्सले नै शरिरलाई तन्दुरुस्त राख्छ । सेक्स एउटा शरिरलाई मात्र नभएर हरेक मानसिकता,शाररिक दुबैलाई अति आबश्यक छ । सेक्सले माइन फ्रेस बनाउने काम गर्छ ।
अबको १० बर्षपछि तिर्सना बुढाथोकीलाई कस्तो अबस्थामा देखिन्छ ?
अबको १० बर्षपछि त म बुढी भइसक्छु । सायद अबको १० बर्षपछि विश्वकै चर्चित व्यक्ति बन्छु र यहि मोडलिङ्ग क्षेत्रमै हुन्छु । स्रोत राष्ट्रिय खबरबाट
नवराज सिलवालले उठाए पहिलो पटक मृत्युदण्डको सजाय दिनुपर्ने आवाज